पोखरा फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, १ भदौ २०७५) | गृहपृष्ठ
Home लगानी पोखरा फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, १ भदौ २०७५)
on: १ भाद्र २०७५, शुक्रबार ०९:४८ लगानी
पोखरा फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, १ भदौ २०७५)
पोखरा फाइनान्स कम्पनीले आव २०७४/७५ को चौथो त्रैमाससम्ममा रू. ९ करोड १३ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा ४ प्रतिशतले बढी हो । कम्पनीले अघिल्लो आवमा रू. ८ करोड ७७ लाख नाफा कमाएको थियो । चौथो त्रैमाससम्ममा कम्पनीको चुक्तापूँजी ४६ प्रतिशतले बढेर रू. ८१ करोड ६४ लाख पुगेको छ । कम्पनीले १ बराबर शून्य दशमलव १५ (१ः०.१५) अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गरेकाले र बोनस शेयर वितरणपछि चुक्तापूँजी बढेको हो । रिजर्भ कोषमा रू. ३५ करोड ७५ लाख छुट्याएको छ । यो रकम अघिल्लो आवको तुलनामा ६६ प्रतिशतले बढी हो । साथै, कम्पनीले २०७४/७५ को नाफा र जगेडा कोषबाट ५ प्रतिशत बोनस शेयर र ८ दशमलव ६८४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको साउन २८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । सो लाभांश नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृत र कम्पनीको आगामी साधारणसभाबाट पारित भएपछि शेयरधनीले पाउनेछन् ।
कम्पनीको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार आव २०७४/७५ र २०७३/७४ बीच तुलना गर्दा :
गत असार मसान्तसम्ममा कम्पनीले रू. ४ अर्ब ३२ करोड निक्षेप सङ्कलन गरेको छ भने रू. ४ अर्ब १४ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा निक्षेप १९ प्रतिशत र कर्जा २० प्रतिशतले बढी हो । कम्पनीको लगानी ३३ प्रतिशतले बढेर रू. ३१ करोड ५७ लाख पुगेको छ ।
खुद ब्याज आम्दानी रू. १६ करोड ९९ लाख रहेको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा ९ दशमलव ८५ प्रतिशतले कमी हो । कम्पनीको ब्याज खर्च बढेकाले खुद ब्याज आम्दानी घटेको हो । कम्पनीको कर्मचारी खर्च रू. ५ करोड ४० लाख, अन्य सञ्चालन खर्च रू. ४ करोड ५१ लाख र सञ्चालन नाफा रू. १४ करोड १५ लाख रहेको छ ।
कम्पनीले सम्भावित जोखीमबापतको व्यवस्थामा रू. ७८ लाख ७७ हजार छुट्याएको छ भने निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव १२ प्रतिशत रहेको छ । पूँजी कोष लागत ९ दशमलव २१ प्रतिशत र पूँजी कोष पर्याप्तता २४ दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको छ ।
कम्पनीको आगामी योजना थप शाखा सञ्जाल विस्तार गरी धेरैभन्दा धेरै ग्राहकको पहुँचमा पुग्ने उद्देश्यका साथ नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याउने रहेको छ । लगानीमा विविधता अपनाई संस्थागत सेवाको गुणस्तर र मुनाफा दुवै पक्षलाई सुदृढ गर्दै लैजाने योजना रहेको छ ।
कम्पनीको चालू आवको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार तरलता अनुपात २९ दशमलव ११ प्रतिशत, प्रतिशेयर आम्दानी (वार्षिक) ११ रुपैयाँ १९ पैसा, मूल्य आम्दानी अनुपात १२ दशमलव ०७ र प्रतिशेयर नेटवर्थ १ सय ४३ रुपैयाँ ७९ पैसा रहेको छ । बिहीवारको शेयर मूल्य रू. १ सय ४६ रहेको छ ।
विक्री चाप : कम्पनीको बिहीवार भएको शेयर कारोबारमा खरीद चापको तुलनामा विक्री साढे ६ गुणा बढी छ । उक्त समयसम्ममा ३ हजार ७ सय ३७ कित्ता शेयर विक्री र ५ सय ५० कित्ता शेयर खरीद गर्ने माग रहेको थियो ।
मैनबत्ती विश्लेषण : कम्पनीको ६५ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा इन्भेर्टेड ह्याम्मर आकृति बनेको छ । यस्तो आकृतिले कम्पनीको शेयरमूल्य बुलिसमा रिभर्स हुने सङ्केत गर्दछ । विश्वसनीयता भने सामान्य रहेको छ ।
आरएसआई : कम्पनीको ६५ दिनको कारोबारमा आरएसआई न्युट्रल जोन (६४ दशमलव ७३ स्केल)मा छ । यसले शेयर खरीदबिक्री चाप सन्तुलनमा देखाउँछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन : कम्पनीको ६५ दिनको कारोबारमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन ३ दशमलव ७७ बिन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून रहेको छ । यसले जोखीम पनि न्यून रहेको बुझाउँछ ।
मुभिङ एभरेज : कम्पनीको ६५ दिनको कारोबारमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिएका छन् । २६ दिने औसत मूल्य रेखा र १४ दिने मूल्य रेखाभन्दा हालको मूल्य माथि रहेको छ । बिहीवारको शेयर मूल्य रू. १ सय ४६ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य महँगिएमा रू. १ सय ५० मा प्रतिरोध र मूल्य सस्तिएमा रू. १ सय ४४ मा टेवा पाउने देखिन्छ ।
पोखरा फाइनान्स : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, ३ फागुन २०७५)
३ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार ०९:२३
पोखरा फाइनान्स : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, १६ मङ्सिर २०७५)
१६ मंसिर २०७५, आईतवार ०८:१९
प्रोग्रेशिभ फाइनान्सको २१ लाख कित्ता शेयर लिलामीमा
४ मंसिर २०७५, मंगलवार १४:३१
प्रोग्रेशिभ फाइनान्सको हकप्रद शेयरको बाँडफाँट
३ मंसिर २०७५, सोमबार १३:१३